गोलभेँडा किन महँगो? :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
गोलभेँडा किन महँगो?
यो साता सामाजिक सञ्जालमा गोलभेँडा व्यंग्यको विषय बन्यो।
आइतबार एक जनाले ट्विट गरे, ‘गोलभेँडा कसरी भनेर सोधेको, ५ रूपैयाँ गोटा रे!’
लगत्तै अर्काले लेखे, ‘छिमेकमा हल्लीखल्ली थियो। मोटर नै किनेछन् कि क्या हो भन्या त टमाटर रैछ!’
पछिल्लो समय भाउ अकासिएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘गोलभेँडा व्यंग्य’ सुरु भएको छ।
असोजसम्म सामान्य गोलभेँडाको मूल्य महिनादिनभित्रै दुई सय प्रतिशत बढेको छ। असोज १३ गते ३५ रूपैयाँ प्रतिकिलो रहेको गोलभेँडा कात्तिक १४ मा १ सय ५ पुग्यो।
भाउ बढ्ने क्रम यहीँ रोकिएन।
कात्तिक २८ सम्म पुग्दा उपभोक्ताले १ सय २५ रूपैयाँ तिर्नुपर्यो।
व्यवसायीका अनुसार गोलभेँडाको मूल्य असोजयता दिनकै १०–१५ रूपैयाँ बढ्दै गएको छ। दुई वर्ष अवधिमा कहिलेकाहीँ उतारचढाव आए पनि यतिसम्म महँगिएको थिएन।
यसरी एक्कासि बढ्नुको कारण के त?
यो मूल्यवृद्धिले गोलभेँडा किसानलाई फाइदा पुगेको देखिँदैन। अहिले पनि कृषकले ५०–६० रुपैयाँ किलोमै बेचिरहेका छन्। भक्तपुर, कीर्तिपुर लगायत काठमाडौं आसपास क्षेत्रका किसानले बेच्ने मूल्य किलोको ४० देखि ५० छ।
धादिङका किसानले ६० देखि ७० रूपैयाँ किलोमा बेचिरहेका छन्। खेतसम्मै गएर गोलभेँडा किनेर ल्याउने मध्यस्थकर्ता तथा थोक बिक्रेताले नै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।
‘कोल्ड स्टोर’ को सुविधाले पनि व्यापारीलाई कम मूल्यमा किनेर बढीमा बेच्न सुविधा भएको उनीहरू बताउँछन्।
व्यापारीको भनाइ छुट्टै छ। मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा मूल्य बढेको उनीहरू जिकिर गर्छन्।
‘गएका वर्ष नेपाली उत्पादनले नै बजार माग धान्थ्यो। यसपालि भारतबाट ल्याउनुपरेको छ,’ दुई दशकदेखि कालिमाटीमा तरकारी व्यवसाय गरिरहेका सप्तरीका सञ्जयकुमार दासले भने, ‘भारतबाट ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढी भएकाले मूल्य बढेको हो।’
पहाडमा उत्पादन कम भएको र तराईमा बाढीले नष्ट हुँदा भारतबाट ल्याउनुपरेको उनले बताए।
काठमाडौंमा पाइने गोलभेँडा खासगरी काभ्रे, धादिङ र उपत्यकाभित्रैको हो। यी क्षेत्रमा यसपालि उत्पादनै घटेको दास बताउँछन्।
उनका अनुसार भारतबाट बढीजसो ठूला गोलभेँडा आउँछन्, जुन सलादमा प्रयोग हुन्छन्। सर्वसाधारणले हरेक छाक तरकारी र अचारमा प्रयोग गर्ने सानो गोलभेँडा नेपाली नै हो।
गोलभेँडा लगायतका तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मूल्य नियन्त्रण गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ। यति हुँदा उपभोक्ताले राहत पाएका छैनन्।
गोलभेँडाजस्तै एक्कासि उच्च मूल्य हुने अर्को तरकारी बन्दा हो। कालिमाटी तरकारी बजारका अनुसार पछिल्ला चार वर्षमा बन्दा पहिलोचोटि किलोको सय रुपैयाँ नाघेको छ।
सामान्यतया सदाबहार सस्तो तरकारीमा गनिने बन्दा पनि यसपालि प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ पर्छ।
दासका अनुसार बन्दा पनि आन्तरिक उत्पादनले नपुगेपछि भारतबाट ल्याउनुपर्दा मूल्य बढेको हो।
बजार अनुगमनमा संलग्न आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ कालोबजारीबाट मूल्य बढेको पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला नपरेको बताउँछन्। तरकारीमा खरिद–बिक्रीको बिल, तथ्यांक केही नभएकाले अनुगमन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले शुक्रबार राति कालिमाटी बजार अनुगमन गरेका थियौं, कागजपत्र हेर्दा कालोबजारी, कृत्रिम अभावको ठोस प्रमाण फेला परेन,’ श्रेष्ठले भने।
किसान तहसम्म पुगेर उनीहरूको लागत, बिक्री र बजार मूल्यको तुलना गरेपछि मात्र पत्ता लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘हामीले अब किसान तहमै पुगेर अन्तरक्रिया गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने।
कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ मीनरत्न अर्याल भने यसपटकको मूल्यवृद्धि माग, आपूर्ति र उत्पादनको असन्तुलनबाट उत्पन्न भएको र केही मात्रामा व्यापारीको बदमासी पनि मिसिएको बताउँछन्।
नजिकिँदो चुनावले पनि मूल्य बढाउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।
‘देशभरका नागरिक चुनावमा होमिएका छन्, यसले स्वाभाविक रूपले उत्पादनमा असर पुगेको छ,’ अर्यालले भने, ‘चुनाव बेला खानपिन र भोजभतेर बढ्दा गोलभेँडा र अन्य तरकारीको खपत बढी छ। व्यापारीहरूले यही मौकाको फाइदा उठाएका हुन सक्छन्।
यस वर्ष पर्यटक आगमन बढ्नुले पनि तरकारी खपत उच्च भएको उनले बताए।
तराईको बाढीले उत्पादन घटेर मूल्य अकासिएको भन्ने तर्कसँग उनी सहमत छैनन्।
‘पहिलो कुरा त काठमाडौं तराईको गोलभेँडामा निर्भर छैन, त्यसमाथि वर्षाको सिजनमा त्यहाँको उत्पादन स्वतः कम हुन्छ,’ कृषि अर्थविज्ञ अर्यालले भने, ‘बाढीले पनि तरकारीमा उल्लेख्य क्षति पुर्याएको छैन।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २८, २०७४, ०४:०६:३९